पोजिटिभ्मवाद र आशावाद! मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	25 अप्रिल 2019 मा	• 10 टिप्पणिहरु
"जीवन पाउनुहोस्एक मूर्ख र एक वाक्य हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो चिन्ताजनक छ कि संकेत छ कि व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिएको व्यक्तिले अल्पविराम वा निराशाजनक चीजहरूमा अत्यधिक मात्राको समय खर्च गर्दछ (विकिपीडियाको अनुसार)। मार्टिन व्रिजल्याण्डले लेखेको सबैले प्रायः यस्तो अहिल्यै निराशाजनक व्यवसायको रूपमा वर्णन गरेको छ। "तपाईं सकारात्मक कुराहरूमा राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ। तपाईं यो संसारमा के गल्तीको बारेमा केहि गर्न सक्नुहुन्न। यो सबै गहिराई र नकारात्मक छ र यसमा धेरै रिस हुन्छ। यदि तपाईं समाजमा सकारात्मक योगदान दिनुहुन्छ र आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। " र तपाई प्रायः अधिक टिप्पणीहरू सुन्नुहुन्छ जस्तो कि जब तपाइँ समाचार विश्लेषणहरू लेख्नुहुन्छ। असाधारण मजाकिया, राजनीतिज्ञ वा मुख्य स्ट्रीम मिडिया चैनहरूमा जब यो जस्तो भनिएको छैन।
म केवल पाठकलाई सपनाबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्न चाहन्छु: म के गर्छु धेरै आशावादी र सकारात्मक छ! लक्ष्य यो हो कि एक पाठक को रूप मा तपाईं आफ्नो सम्मोहन देखि जागृत छ र हेर्नुहोस् कि तहखाने तपाईं संग घनिष्ठ छन्। न केवल कि: यदि तपाईंले यसको माध्यमबाट हेर्नुभयो भने तपाईं परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं कस्ता आशावादी हुनुहुन्छ?
तपाईं एक आशावादी हुनुहुन्छ यदि तपाईं धेरै हँसिलो र गीर र गोरी जस्तै मजाक र चुटकुले बनाउनुहुन्छ? अज्ञातले धेरै मजाक बनाउन सक्दैन। उहाँले तपाईंलाई बताउनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, प्रहरी विस्तारको स्थितिमा। तपाईं त्यो नकारात्मक वा निराशावादी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ किनभने तपाईं यसलाई सुन्न चाहनुहुन्न, तर तपाईं यसलाई पनि नकारात्मक विकास पाउन सक्नुहुन्छ जुन यो हुन्छ र तपाईं खुसी हुनुहुन्छ कि कसैले तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिन्छ।
तपाईले यसलाई नकारात्मक खोज्न सक्नुहुनेछ जब एक मित्रले "अरे, अलि, गाडी आउँदैछ!"(जबसम्म तपाईं चुपचाप सडकमा क्रस गर्न चाहानुहुन्छ र कार देख्नु भएको छैन) वा तपाईं आभारी र आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईले यो खतरालाई बताउनुभएको छ। "हो, तर त्यो पुलिस अवस्था सबै बेकार छ। यो सबै मात्र आवश्यक छ किनकी सबै आतंकवाद र यति"। तपाईं सोच्नुहुन्छ किनकी तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईं मीठा माटो खाँदै हुनुहुन्छ। "एक मिठो मंगो? कस्तो प्रकारको बकवास हो?"म तपाईलाई बिचार गर्न खोज्दैछु कि टिभी र अन्य मिडियाले तपाइँलाई प्रविधिको प्रयोगबाट सम्मोहनको माध्यमबाट सम्मोहन अन्तर्गत राखेको छ। तपाईं सोच्नुहोस्, जस्तै तल भिडियोमा, तपाइँ केहि मीठो लिइरहनुभएको छ र म प्रमाणित गर्न सक्दिन कि यो खट्टा हो। सम्मोहन तपाईंलाई देख्न र सुन्नबाट रोक्छ। सम्मोहनवादले तपाईंलाई बताएको छ कि यो एक मीठो रसदार आम हो। टिभी सम्मोहनकर्ताहरूले तपाईंलाई पुलिस राज्यको आवश्यकता ल्याउदछन् र तपाईंले आफ्नो जेलको निर्माण भइरहेको देख्नुहुन्न। (भिडियो अन्तर्गत हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस्) साँच्चै गर्नुहोस्!)
"हो, तर म सम्मोहन गर्न सक्दिन। र टिभि सम्मोहन होइन। समाचार पत्र र रेडियो पनि।"त्यसपछि तपाईंले पर्याप्त अध्ययन गर्नुभएको छैन त्यो कसरी काम गर्दछ। तर मैले पहिले नै बुझें। यो अब धेरै थकाइ र नकारात्मक हुन सक्छ। तपाईं आशावादी हुनुहुन्न। तपाईं सोच्नु हुनेछ:खैर, मलाई लाग््छ कि म एक मीठो रसदार माई खाई, मलाई परवाह छ। त्यसपछि कम्तीमा मलाई अधिक सकारात्मक लाग्छ!"त्यसो भए जब तपाईं खतरामा पर्दा कार तिर लाग्नु हुन्न? ठीक छ। तपाईंले खतरा देख्नुहुन्न र तपाई यसलाई हेर्न चाहनुहुन्न। खैर, त्यो तपाइँको छनौट हो। तपाईं जिज्ञासा बाहिर यो वेबसाइटमा आउनुभयो र तपाईंले चीजहरू पढ्नुभएको हुनसक्नु भएको छ: "त्यो सबै सम्भव छैन। सबै मिडियाले फरक बोल्छ। सबैजना झूट बोल्न थाले र थोडा धोखा गर्न थाले!"तपाईं त्यो तरिका सोच्न चाहनुहुन्न। तपाईं जस्तो जस्तो सोच्न सक्नुहुन्न। तपाईं मानिसहरूको भलाइमा भरोसा राख्नुहुन्छ। तपाईं राजनैतिक नेताहरूको भलाइमा भरोसा राख्नुहुन्छ। राम्रो:उच्च गतिमा कुनै गाडी तपाईंसँग हिँडिरहेको छैन। सडकको बीचमा शान्त रहनुहोस्।"
म आफ्नो व्यक्तिगत गहिरो यस वेबसाइटको साथ चिपकाउँदै छु। यसले मलाई धेरै आनन्द र दुखाइ खर्च गरेको छ। "हो, यो तपाईंको आफ्नै गल्ती हो। यो लेख्न तपाईंको छनौट थियो।"किनकि मैले हाम्रो वरिपरि देखेँ कि हामी आत्म-निर्मित समस्याहरू द्वारा कसरी जालिएको छ, जहाँ मानिसहरू अधिक र अधिक स्वतन्त्रताबाट चोरी भएका छन्। अधिक र अधिक कानुन र नियमहरू र हामीसँग हामीलाई निरन्तरतामा बेचेको छ कि समस्याले गर्दा मेडियाले हामीलाई विश्वास गर्छ कि उनीहरूले अवस्थित छन्। राम्रो छ कि तपाईं सकारात्मक बनाउँछ! सबै टेलिभिजनमा जुन सबै दु: ख देख्न सकिन्छ, जसको अर्थ हामीलाई बढी "सुरक्षा उपाय" चाहिन्छ! "हां, तर कम से कम उनि अझै पनि एक शो मा हास्य र प्रदर्शन संग पोशाक, जस्तै जेरोन पउउ वा DWDD संग"। त्यो सम्मोहन प्रविधिहरूको ठीक भाग हो जसले मानिसहरूलाई लागू गर्यो। म तपाईंलाई खतरनाक खतरामा पुर्याउँछु र न त नकारात्मक हो न त निराशावादी। त्यो राम्रो छ! यसले तपाईंलाई सजग गराउनुपर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो छेउमा भाग लिनु अघि तपाईं छेउमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सकारात्मक छ!
हरेक वर्ष म 4,5 मिलियन डच मान्छे (काउन्टर हेर्नुहोस्) मा पुग्छ र थाहा छ कि उनीहरु कसरी अफगानिस्तान पुलिस स्थिति संग सामना गर्न को लागी। योजना हाम्रो आँखाको अगाडि बाहिर निस्केको छ, तर हामी सोचेको छौं कि हामी मीठा रसदार माई खाईरहेको छौं। सबै कानून जो अब खुला छ र हामीले देख्ने सबै टेक्नोलोजी एक डिजिटल निगरानी प्रणाली को निर्माण गर्न को लागी डिजाइन गरिएको थियो जसमा प्रत्येक क्रिया, हरेक कुराकानी र प्रत्येक लेनदेन तय गरिएको छ र जसमा जनसंख्या को ठूलो वर्गहरु निरीक्षकहरु र एक नै कुरा को लागि गार्डन को रूप मा कार्य गर्दछ। प्रणाली उत्पन्न हुन्छ। हामी एक चीनी मोडेल तिर चोरी गर्दैछौं, तर खुला क्रेडिट को माध्यम ले जो तेश्रो क्रडिट प्रणाली संग चीन मा हुन्छ। हामी सम्मोहन को अधीन फिर्ता ले लिया छ र कानून संभव छ कि कानून बनाछन। तपाईं त्यो सुन्नु हुँदैन, किन यो सकारात्मक छैन? यो सकारात्मक छ! किनकी यदि तपाईं जान्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिज्ञ र विरोध आंदोलनहरू तपाईंको लागि यो गर्न जाँदैछन्। तपाई आफैलाई गर्नु पर्छ।
यो समय परिवर्तन गर्न समय हो। सात वर्ष पहिले मैले त्यो छनौट गर्ने निर्णय गरेँ, मेरो जागिर छोड्न र लेखन सुरु गर्ने निर्णय गरे। यो एक सजिलो छनौट छैन, किनभने तपाईं सबै प्रकारका निश्चितता गुमाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले आफैलाई सोधें कि म गतिशील रूपमा हेर्न चाहन्छु कि हामी बिस्तारै पुलिस राज्य र ट्रकरीज र धोखाधडीको माध्यमबाट नेतृत्व गरिरहेका छौं वा म यो धेरै ढिलाइ भन्दा अगाडि लड्न जान्छु। सबै विरोधको जस्तै जाँच गरिएको छ; कसले वास्तवमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ? तिनीहरू केवल गोप्य रूपमा हामीलाई अधिक केन्द्रीकरणको लागि सडकमा अझ बढि नेतृत्व गर्दैछन् र अधिक प्रहरी अवस्थाका उपायहरू। त्यो अस्थिर छ र पीडितहरू फैलिएको छ, तर हामी अहिले गति पाइरहेका छौ। त्यसोभए वास्तविक विरोध प्रत्येक व्यक्तिबाट आउँछ: आफैबाट। म यसलाई "विपक्षी" बोलाउन चाहन्नँ, किनभने त्यो शब्दले परिचित हेगेलियन पोलिटेक्टिङ्ग लुकेको छ। प्लस र माइनस एक ब्याट्रीमा विद्युतीय प्रत्यक्ष हाल प्रदान गर्दछ। विरोधाभास (थीसिस र एंटी-थीसिस) संश्लेषणको लागि नेतृत्व गर्दछ। यसकारण हामी पार्टीलाई एक वा बायाँ: बायाँ, दाँया, र यसको विरुद्ध र यसका लागि छनौट गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं। त्यसोभए ती विरोधाभासहरू सावधानीपूर्वक मिडियामार्फत ईन्द्रित छन्।
हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौं? हामी क्रांति मार्फत गर्न सक्छौं। हृदयबाट सुरु हुने एक क्रांति; आत्माको स्तरमा। यो विश्वास मा परिवर्तन को साथ शुरू हुन्छ 'परिवर्तन माथिबाट आउँछ"to"परिवर्तन मलाई बाट आउछ"। वास्तविक क्रांतिले संसारमा तपाईंको आत्माको शक्तिशाली प्रभावमा विश्वास गर्न थाल्छ। यो 'तितली प्रभाव' लाई कल गर्नुहोस् वा यसलाई 'उज्ज्वल प्लेटमा ड्रप' भन्छ, शक्तिमा फरक फरक छ। हामी यसमा विश्वास गर्दैछौं हाम्रो इच्छाको प्रभाव हरायो। हामी बिर्सिएका छौं हामी वास्तवमा आत्माको स्तरमा छौं र हामी बिर्सिएका छौं कि प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ। त्यो इच्छाको बलियो निर्णयको साथ सुरु हुन्छ। यसलाई एक म्यान्टबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। यसलाई आफैलाई बोल्नुहोस्:
"मेरो छनौटहरू मेरो तत्काल वातावरण र संसारमा ठूलो प्रभाव छ। अब देखि मैले आफैं परिवर्तन गर्नेछु!"
एकपटक हामी देख्छौं कि आत्मा हाम्रो सबै छनौटहरू र हाम्रा सबै कार्यहरू पछि ड्राइभिङ्ग बल हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामी त्यो आत्मालाई अझ बढी सुन्न र 'के सुरक्षित र निश्चित छ' मा कम सुरू गर्न सुरु गर्छौं। हामी साहसी छनौट गर्न जाँदैछौ; अल्पकालिक निश्चितताहरु लाई जाने र परिवर्तन मा विश्वास गर्न को हिम्मत गर्न को लागी हिम्मत छ कि यिनी बहादुर विकल्पहरु को बारे मा ल्याउन सक्छ।
ठूलो परिवर्तन माथिबाट आउँदैन, न त व्यवस्थित (नियन्त्रित) प्रतिरोधबाट, न त राजनीतिज्ञहरू of विपक्षी दलहरू वा नयाँ मिडिया स्रोतहरू। ठूलो परिवर्तन तपाईं संग सुरु हुन्छ। त्यो तपाईबाट अब हुने हुने छनौटहरूको साथ सुरु हुन्छ। यो तपाईंको हृदय सुन्न सुरु हुन्छ; तिम्रो आत्माको ढोका। तपाईंको जीवनको जोस्टमा कसले छ? के तपाईं आफैलाई वा कि हुनुहुन्छ (डरको नियन्त्रण रेखा र निश्चितताको हानि) मार्फत तपाइँको बैंक, मालिक, राजनीतिक दल, तपाईंको क्यारियर वा जो पनि? आहा, तपाईं केवल विश्वास गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईंको छनौटहरू संसारमा कुनै प्रभाव छैन, किनभने भाप लोमोमोटिव रेसिङ हो! तपाई किन सोच्नुहुन्छ कि मानिसहरु को जनता पाडल देखि कब्र देखि क्रमांकित गरदैछ र गति मा रहन र सिस्टम मा भाग ले रहे हो? किनकि ती मानिसहरू शक्तिविहीन आत्माको शक्तिशाली प्रभावको लागि मृत्यु जस्तै छन्। "हामीलाई अर्को नायक चाहिँदैन?"टीना टर्नर? हो हामी गर्छौ! हरेक व्यक्ति जो आफ्नो स्पष्ट अल्पकालिक निश्चितता को जाने को लागी र दिल देखि कार्य शुरू गर्न को लागी, महान परिवर्तन को बारे मा ल्याउनेछ। त्यो कहाँ छ वास्तविक क्रांति सुरु हुन्छ।
क्रांति, त्यो के हो?
म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि आज यो क्रांति सुरु र आफैलाई सोध्नुहोस्:म परिवर्तन ल्याउन सक्छ म, हामी सबै हाम्रो तत्काल क्षेत्रमा विभिन्न छनौट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जब मेरो seeming certainties लागि चयन र म बाहिर रोल आफ्नो लिपि शक्ति छु वा म हुँ?"
"हो, तर म एक बैेलिक हुँ र मलाई मान्छेले मेरो फाइल पूरा गर्न घरबाट निकाल्नु पर्छ"
"हो, तर म एक प्रहरी अधिकारी हुँ र मलाई ढोका बलियो हुन्छ किनभने अन्यथा मानिसहरूले कहिल्यै आफ्नो ऋण तिर्न सक्दैनन्"
"हो, तर म युवा हेरचाह गर्ने कामदार हुँ र यदि मैले यो बच्चालाई अलगावको कक्षमा राखेन भने, उनीहरूले कहिल्यै कसरी सिक्न कसरी नियमहरू समायोजन गर्नेछन्"
"हो, तर म एक सामाजिक सेवा कर्मचारी हुँ र मैले लाभ फड्काउन रोक्नको लागि घर निरीक्षण गर्न चाहन्छु"
"हो, तर म हुँ ... र के गर्छु म केवल राम्रो छ"
के तपाईं प्रणाली को रखरखाव रोक्न को लागी तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ? किन हामी अझै पनि अभिनेताहरूको लागि मतदान गर्न सक्षम छनौट गर्न चुनावमा जानुहुन्छ लोकतान्त्रिक प्रवृति बेच्न सक्षम छन्, तर अन्ततः ट्रिकरी र धोकावटको माध्यमबाट बढ्दो दमनकारी उपायहरू मार्फत धकेल्छ? हामी किन ईमानदारी र ईमानदारीमा आधारित आत्म-भरोसा र संगठनात्मक विज्ञानको शक्तिमा विश्वास गर्दैनौं। किन होइन? किनकी हामी अवधारणा संग प्रोग्राम गरिएको छ किनकि सबै केहि प्रशासनिक रूपमा उपरोक्त बाट प्रबन्धित हुनु पर्छ। किनभने बचपनबाट हामी धेरै र अधिक नियमहरूमा आधारित प्रणालीमा बसिरहेका छौं र हामी डराउँछौं कि ती सबै नियमहरू बिना गलत हुनेछ। हामी प्रिवाइल टाइमहरूमा फर्कन चाहँदैनौं, के हामी? हामी ट्राफाइड गर्न ट्राफिक रोशनीहरू र ट्राफिक नियमहरूलाई अझै पनि आवश्यक छ। हामीलाई ती नियमहरूको लागू गर्ने आवश्यकता छैन? के तपाईं एक प्रकार को अराजकता Vrijland मा जान चाहानुहुन्छ? तिमीलाई थाहा छ के म चाहन्छु? कि तपाइँ एक पटक फेरि आफ्नो हृदयको शक्तिशाली प्रभाव पत्ता लगाउनुहुनेछ ('आत्मा' पढ्नुहोस्) र जान्नुहोस् कि हामी अब पूर्व-प्रोग्राम गरिएको लिपिको अनुसार खेल खेल्न सक्दैनौं। बस क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्क पत्ता लगाउने वास्तवमा त्यो के छ।
यो तपाईंको आत्माबाट क्रांतिको लागि समय हो। र त्यो तपाईंको छनौटबाट सुरु हुन्छ। यो तपाईंको हृदय र तपाईंको अन्तस्करणमा सुन्न सुरु हुन्छ। तपाइँको टिभी बन्द गर्नुहोस्, सबै समाचार स्रोतहरू बन्द गर्नुहोस् र तपाईंले प्रोग्रामिङबाट आफैलाई बिच्छेद गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईले प्रत्येक दिन बमोजिम प्रयोग गर्नुहुन्छ ताकि तपाइँ आफ्नो भित्री आवाज फेरि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो भित्री आवाज होइन, निस्सन्देही, वास्तवमा एक भाषण जाल जो तपाइँसँग कुरा गर्दछ। यो तपाईंको प्राण हो जसले तपाईंलाई शुद्ध र भ्रामक छनोट दिन्छ। यसले तपाईंलाई थाहा छ कि निश्चित कुरा स्पष्ट छन् र कि साहसी तपाईं बलियो बनाइरहेका छन्। तपाईंको आत्माले तपाईंलाई देखाउँछ तपाईंको परिवर्तन प्रणाली र लिपिमा ठूलो प्रभावको।
सकारात्मक र आशावादी हुनुहोस्
अब देखि हामी सकारात्मक र आशावादमा नयाँ परिभाषा दिन्छौं। सकारात्मक हुनु भनेको तपाईं खतरनाक सामना गर्न हिम्मत गर्नु होस्, ताकि तपाईं भविष्यमा दु: ख को रोक्न उपायहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यसोभए सकारात्मक हुनु भएको छ कि तपाईले तपाइँको साथीमा गोरखाको कारको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन सडकको बीचमा उभिएको छ। तपाईं एक आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाईं मिडिया द्वारा प्रयोग गरिने समस्याहरु र स्पष्ट धम्कीहरु लाई बढाने को हिम्मत को लागि अधिक कानून पेश गर्न को लागि। तपाईं एक आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाईं के गरिरहनुको हिम्मत र आजको भित्र क्रान्ति आज सुरु हुन्छ। तपाईं एक आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाई रेतबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ र गुलाबी क्लाउडमा मात्र बाँच्न नदिनुहोस्। सकारात्मक र आशावादी साधन हुनु भएको छ कि तपाईंले यो के लायक के के छ भनेर के गरिरहनुभएको छ र हेर्नुहोस् कि यो ठीक छ 'नकारात्मक र निराशावादी'। निस्सन्देह अब तपाईं आर्केस्ट्राको साथ पट्टीमा बस्नु भएको छ भने अब अझै बढी सकारात्मक महसुस गर्नेछु र न त जहाजको पङ्क्तिमा छेद छ भनेर सुनेको छैन। तथापि, तथापि, तपाईं चेतावनी सुन्न र रोजगारी राफ्टमा सुरक्षित रूपमा छनौट गर्नुभएको छ भने शायद तपाईं एक सानो र सकारात्मक छ। चेतावनीहरू र जागरूकता बढ्दै जाँदा "नकारात्मक" वा "निराशावादी" भनी वर्णन गर्न सकिदैन। त्यसपछि तपाईं केवल आर्केस्ट्रा सुन्नुहोस् र पानी धेरै जहाजमा छ जब पानी जहाज र यसको पार्टीभोगी निगलन्छ।
जीवनको लागि यो सकारात्मक आशावादी रवैया संग सुरू गर्नुहोस् र आफ्नो हृदयबाट क्रांति सुरु गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ मेरो लेखहरू मान्नुहुन्छ भने, कृपया सानो समयको माध्यमबाट मलाई सहयोग गर्न र सदस्य बन्नुहोस्। अग्रिम धन्यवाद
एलन मस्क सिमुलेशन सिद्धांत को बारे मा, आशावाद र 'यात्रा'
लाखौं नोट: सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ किनभने चुनाव आउँदैछ
अल Aqsa मस्जिदमा आगोको लागि Notre-Dame आगो भंग गर्न यरूशलेम (जसलाई मन्दिरको लागि बाटो बनाउनु पर्छ)?
क्रिस्टचर्च न्यूजील्याण्डमा दुई मस्जिदहरूमा आक्रमणमा 49 को मृत्यु
ट्याग: रिस, विशेष, नकारात्मक, नकारात्मक, आशावाद, आशावादी, निराशावाद, निराशावादी, सकारात्मक, positivism, के हो
25 अप्रिल 2019 मा 13: 29
25 अप्रिल 2019 मा 20: 37
त्यो मार्टिन हो कसरी
एकपटक तपाईंलाई थाहा छ कि यो कस्तो छ, यो निराशाजनक महसुस गर्न सक्छ, किनकी यो तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ।
यदि धेरै मानिसहरू तपाईंको साइटमा जान्छ भने साबित हुन्छ कि समूह ठूलो छ। निस्सन्देह यो सबैको साथ एकैचोटि भूमिगत हुनेछैन र यसले कुनै कुरा गर्दैन।
WW फेरि पनि सच मा प्रयोग गर्न को लागी, reprogramming
25 अप्रिल 2019 मा 20: 41
माफ गर्नुहोस् कि सानो स्क्रिनमा ठूलो औंलाहरू वास्तवमा पनि काम गर्दैन।
मस्तिष्कको पुनरुत्थान थोपा लिन्छ।
मलाई लाग्छ यो यस अवस्थामा पृथ्वीमा जन्मेको उद्देश्य हो। आफैलाई फिर्ता पत्ता लगाउनुहोस् र त्यहाँ मात्र एक मात्र हो जसले पछाडिको तूफान छोड्न सक्दछ (भले पनि यो अझै पनि हिँडिरहेको छ)।
25 अप्रिल 2019 मा 22: 30
यस स्पष्ट लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
यदि यो पेपरमा छापिएको थियो र एक पटक राम्रो हुनेछ
मेट्रो को सट्टा स्टेशनहरुमा वितरित गरिन्छ
26 अप्रिल 2019 मा 09: 47
यो धेरै नियमहरु संग एक नियमित जीवन हो!
28 अप्रिल 2019 मा 21: 46
तपाईलाई धन्यवाद (आंशिक रूपमा) त्यो अदृश्य जेलबाट बचाइयो।
नहीं म अब वोट नहीं ...
मतदानलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ... एक सरकार जसले आफ्नै मासुको निरीक्षण गर्दछ।
हो, मैले मेरो कामलाई सुरक्षामा छोडें।
उच्च तहमा मात्र रुचिहरू छन्, प्रणाली बिरामी छ!
के मैले लाभ उठेको छु?
हो, म अब धेरै स्वतन्त्रता छु र म खुसी छु!
म अब राम्रो तरिकाले प्रचार को माध्यम ले देख सकते हो!
29 अप्रिल 2019 मा 04: 43
यो म के लागि यो गर्छु!
1 मई 2019 मा 11: 50
मेरो आफ्नै सरल शब्दहरूमा, म सन्देश व्यक्त गर्न चाहन्छु।
शताब्दीको लागि संसारले जनतालाई शासन गरेको छ जुन उनीहरूले चार्ज गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई चासोमा राख्न चाहन्छन्, जनसंख्यामा शक्ति चाहान्छ र मान्छेहरूलाई के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई बलियो बनाउँछ।
शताब्दीका लागि संसारभरका जनसंख्याहरू सत्तामा छन्, तिनीहरू डरसँग बस्छन्, दण्डित हुनदेखि डराउँछन्, बन्द गरीन्छन्, बन्द गरिन्छन्।
जनसंख्या, मान्छे, जुन तिनीहरू चाहन्छन्, हुन सक्दैनन्, उनी स्वतन्त्र छैनन् र सबै प्रकारका (बेवकूफ) कानुन र नियमहरू, नियम र नियमहरू पालन गर्न बाध्य छन् जुन तपाईं जीवनमा चाहानुहुन्छ भन्ने कुरामा रोक्नुहुन्छ।
तर यदि हरेक कामदार व्यक्ति, कुनै पनि क्षेत्रमा, जुनसुकै संसारको वरिपरी सबैले, आफ्नो काम 1 दिनमा राख्नेछन्, के भयो भने के भयो, 1 दिन, 1 दिन के हो? एक जीवनकाल।
चल्दैन पर्दैन, सोमबार3जून 2019 त्यो गर्नको लागि एक उत्कृष्ट दिन हो।
आफ्नो वर्दी लिनुहोस्, आफ्नो कम्प्युटर बन्द गर्नुहोस्, तपाईंको स्टोर बन्द गर्नुहोस्, यसलाई नाम दिनुहोस्, तर यो गर्नुहोस्।
र ट्रकर्स र किसानहरू, तपाईंसँग यसमा ठूलो भूमिका छ किनभने भण्डारहरूमा तपाईंको खाली अलमारियाँ बिना, शेल्फमा कुनै रोटी छैन, तर 1 दिन निरीक्षण गर्न सकिन्छ।
र यदि यो पर्याप्त छैन भने, हामी फेरि यो गर्नेछौं र फेरि।
सत्तामा भएकाहरूले कुनै पनि प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, उनीहरूले तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न चाहने व्यक्तिहरूमा निर्भर छन्, उनीहरूले हामीलाई चाहिन्छ र ती शताब्दीका लागि उनीहरूको सबै भन्दा राम्रो काम गरिरहेका छन्।
हामी सबै नि: शुल्क व्यक्ति छौं र हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं।
म सोशल मिडिया मा मेरो आफैं छैन, तर धेरै धेरै अन्य व्यक्ति हुन् र मलाई आशा छ कि उनि यस सन्देशलाई सकेसम्म जित्न चाहानुहुन्छ।
हामी मानवको बारेमा केही गर्न सक्छौं, डर राख्नुहोस् र यसलाई गरौं।
1 मई 2019 मा 11: 56
धन्यवाद मार्गा। आउनुहोस् आशा छ कि मानिसहरूले साँच्चै आफ्नो डर (वा आलस्यता) अलग राखेर केहि गर्न थाले।
9 जून 2019 मा 21: 35
आजको जीवनमा शरीर र दिमागको लागि यति धेरै विचलनहरू छन्। हामी डर र नियन्त्रणद्वारा डढिएका छौं।
हामी एकै पटक सम्मोहन को विभिन्न रूप मा हो, जसको परिणाम सम्मोटो ताल छ र जो एक ही जीवन मा एक फ्लाईवाइल जस्तै मान्छे को बढावा जारी राखछन।
यो क्रांतिको लागि निश्चित समय हो। तर यस क्रान्तिलाई पहिलो व्यक्ति हरेक व्यक्तिको मनमा सुरू गर्नु पर्छ।
हामी एक जानवर राजा, तानाशाह वा कैबिनेटमा तीरहरूको लक्ष्य गर्न सक्दैनौं, जुन कुनै अर्थ छैन।
त्यो समुद्रबाट लहरहरू लड्न जस्तै छ।
त्यहाँ कुनै खतरनाक छैन र त्यहाँ कुनै शहीदहरू छैनन्, विभाजित र शासन यो प्रतिवादीको विशेषता हो।
यो युद्ध फरक तरिकामा सञ्चालन गर्नु पर्छ।
मानिसहरू केहि गर्न चाहँदैनन् तर आफैलाई यो सुरू गर्न उत्तम छ।
दार्शनिकता सुरु गर्नुहोस्, जीवनमा साँच्चै कत्तिको मूल्यवान छ? म हरेक दिन किन विचलित हुन सक्छु?
कसले यसो भन्छ, किन र त्यसो भए? कसले मेरो बारेमा के भन्न चाहन्छ? तपाईलाई नाम दिनुहुन्छ! सबै कुराको बारेमा सबै कुरा प्रश्न गर्नुहोस्!
आन्तरिक विकासलाई ध्यान र मौनता चाहिन्छ, टिभी र रेडियो बन्द गर्नुहोस्।
एक पुस्तक पढ्नुहोस् कि खैरो कुरालाई उत्तेजित गर्दछ।
एकदम हटाउने अवधि पछि, मनको शान्तिले वास्तविक ध्यानको साथ आउँछ।
त्यो कुरा परिप्रेक्ष्य राख्नु र हाम्रो वरपर सबै केहि विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण हो।
गुणस्तर, आवश्यकताहरू, सम्बन्धहरू, काम, राज्य, मानदण्डहरू, मानहरू।
मानिसहरू ओमप्पेटेंट र ठूलो कुराहरूमा सक्षम छन्।
र जब मानिसहरूले आफैंलाई यो महसुस गर्छन्, मलाई लाग्छ कि परिवर्तनको सुरुवात हो।
« नेदरल्यान्ड्सका लागि इन्भोर्सर्स सुरक्षा नेट रणनीति रबर्ट जेन्ससेन र जेन्सेन.इल?
फोरम डेमोक्रेसी (एफभिड) मा हेनक ओटटेनको प्रस्थान यति अनुमानित छ »
कुल भ्रमण: 13.935.694
तपाई किन यो जान्न चाहानुहुन्छ? op नासाद्वारा फोटो खिचेको ब्ल्याक होल वास्तवमा प्लाज्मा प्लाज्मिड हो
क्यामेरा2op नाइट्रोजन समस्या के हो, किसानहरू किन गुनासो गरिरहेका छन् र किन गति घटाईरहेको छ?